नेपाल-भारत मैत्रीका खास आधार ::ePublickhabar.com
ध्रुबबहादुर प्रधान /
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि नेपाल-भारत साझेदारी तथा भारतीय सहयोगका विभिन्न परियोजनालाई गति दिने विषयलाई लिएर उत्साहदायी ‘इनगेजमेन्ट’ सुरु भएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्रगत बैठक सुरु भएका छन् । तर यो प्रक्रियाले परियोजनालाई द्विपक्षीय समझदारीअनुसार सम्पन्न गर्न खातिर प्रगतिकै रूप लिन भने अझै समय कुर्नुपर्ला । किनकि भारतीय सरकार वा कम्पनीहरूको संलग्नता रहेका परियोजना नेपालमा सकरात्मक छवि बनाउने सवालमा धेरै हिसाबले परीक्षित हुनुपर्ने कारण छन् । यो छवि सुधार्नु भारतकै लागि बढी आवश्यक छ ।
भारत यतिबेला भूगोल, जनसांख्यिक सामथ्र्य, गतिवान् अर्थबजार, भूराजनीतिक महत्वव र क्रियाशील प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट ठूलो विश्वशक्तिमा दरिन आतुर छ । त्यो हैसियतमा स्थापित हुने सबैभन्दा आधारशिला क्षेत्रीय भूराजनीति हो । जसरी युरोजोनका मुलुक सबैतिरको एक तहको सम्पन्नतापछि आपसी शक्ति तथा अर्थ सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन्, त्यो उनीहरूको कुनै अलौकिक जादु होइन ।
त्यो मात्रै व्यावहारिक समझदारी हो, जसका कारण युरोप अहिले ब्रेक्जिटपछि समेत एउटा स्पष्ट ‘प्याट्रन’ मा अगाडि बढिरहेको छ । यहाँ प्रसंग उठ्छ- यही चिज हाम्रो दक्षिण एसियामा किन सम्भव छैन र त्यसको सिर्जनात्मक नेतृत्व भारतले किन लिन सक्दैन ? के भारत सधैं छिमेकीको मामिलामा छुस्की लगाएर बसिरहने र आफैं पनि विकासका उत्कट मोडेलमा छिर्न नसक्ने अप्ठेरो चरित्रको मुलुकमा सीमित हुन चाहन्छ त ? भारत ठूलो खुबीको मुलुक भएर पनि चित्त सानो गरेर बसेको छ भन्ने टिप्पणीलाई त्यसै पन्छाउन नमिल्ने स्थिति त्यसै आएको होइन ।
भारतले विश्वमञ्चमा केकस्तो छवि बनाउँदै जान्छ भन्ने आकलन उसको नेपालसँगको सम्बन्धका आधारमा समेत गर्न सकिन्छ । वास्तवमा नेपाल र भारत एकले अर्कालाई हित नगरिनहुने र आपसी हितप्रतिको इमानदारीबाट दुवै पक्ष प्रगतिको भर्‍याङ चढ्ने चरित्रका छिमेकी हुन् । हिमालय पर्वतको अपार जलराशि र ऊर्जा, उद्योगजन्य प्राकृतिक स्रोत, रापिलो दक्षिणबाट ठण्डा उत्तरतर्फको पर्यटन र विकट उत्तरले सुगम दक्षिणमा पाउने बजारले एकातर्फ दुवै देशको समृद्धि प्रत्याभूत गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ समान धर्म, संस्कृति र सामाजिक आदानप्रदानको इतिहास एवं व्यवहारका कारण कुनै पनि बेला एकले अर्कालाई भर गर्ने सुविधा रहन्छ । यति सुन्दर सम्बन्धलाई न भारतले हेयको नजरले हेर्नु बुद्धिमानी हुन्छ न नेपालले नै सधैं आशामुखी सोचबाट त्यसलाई अथ्र्याउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
समृद्धि आफ्नो भूगोलमा मात्र खोज्दा त्यसको लागि छिमेकलाई बलि चढाउन खोज्दा प्रत्युत्पादक अवस्था आउने धुर्वसत्य हो ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाल-भारत मैत्रीलाई साँच्चै बलियो पार्ने माध्यम चालू परियोजना नै हुन् । ती परियोजना इच्छित, यथोचित ढंगले सम्पन्न हुँदा नेपाली आममानसमा भारतप्रति रहेको शंकाउपशंका, नियतसम्बन्धी प्रश्नको सम्बोधन हुने देखिन्छ । यति निकट, यति धेरै लगानीका सरोकारवाला मुलुक यति ससाना शंकामा रुमलिनु किञ्चित सुहाउँदो होइन । शंका गर्ने ठाउँ दिएकै कारण तदनुरूपकै कतिपय व्यवहारले यस्तो मेलभित्रको बेमेल जन्मेको हो । नभए नेपालीले झन्डै पौने वर्ष अनाहकमा नाकाबन्दी बेहार्नुपर्ने थिएन, जसलाई कहिल्यै पनि कसैले पनि ‘जस्टिफाइ’ गर्न सक्ने छैन ।
चालू परियोजनालाई टुंगोमा पुर्‍याएसँगै नेपाल-भारत सहयोग तथा सहवृद्धिको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने मार्ग खुल्छ । नेपालको समृद्धि भारतको समृद्धिको लागि अपरिहार्य छ । समृृद्धिको अवस्थामा मात्रै नेपालले भारतका सुरक्षा सरोकारलाई सही ढंगमा सम्बोधन गर्न सक्छ । भारत मात्र नभएर अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपालसँग निरन्तर सुरक्षाकै सरोकार राखेको पाइन्छ । समृद्ध भविष्यको लागि बाँकी विश्वसँग विभिन्न कोणबाट ‘नेगोसिएसन’ गरिरहेका दक्षिण एसियाका मुलुकमा आपसी सुरक्षाकै बढी चिन्ता छ । गरिबीको पृष्ठभूमिले त्यसै पनि यो क्षेत्रलाई अँचेटेको छ । साथै पहिचान र धर्मका विषयले विस्तारै आतंकवादको आगो पनि सल्किँदो छ । यसर्थमा आमस्तरमा समृद्धिका फल बाँडिने अवस्था प्रत्याभूत नभएसम्म यो क्षेत्र शान्त र स्थिर नहुने पक्का छ ।
समृद्धि आफ्नो भूगोलमा मात्र खोज्दा त्यसको लागि छिमेकलाई बलि चढाउन खोज्दा प्रत्युत्पादक अवस्था आउने धु्रवसत्य हो । सर्वजन हितायः को सिद्धान्त एउटा सानो समुदायको लागि मात्र लागू हुँदैन । अरूको हितबारे जो व्यक्ति बढी सोच्न सक्छ, ऊ नै अन्ततः प्रियकर र त्यागी कहलाउँछ । आज विश्वका मुलुकबीच स्रोत र व्यापारमाथिको लडाइँ चर्कंदो छ । यसैकारण विश्व महाशक्तिहरू आफ्नो भौगोलिक घेराभन्दा बाहिरका विभिन्न ठाउँमा लडाइँ लड्नमै व्यस्त छन् । बाहिरबाट हेर्दा उनीहरूको भूगोल सुरक्षित देखिन्छ, तर त्यस्तो सुरक्षा टिकाउ हुँदैन । दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा पनि यो परिदृश्यबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्छ ।
हामी फेरि नेपाली सन्दर्भमै आऊँ । निरन्तरको भारी वर्षाका कारण नेपालीले बाढीपहिरोको चपेटा बेहोर्नुपर्‍यो । तराई क्षेत्र बाढीको डुबानमा परी तवाई मच्चियो । अझै हप्तौंसम्म बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापना हुने देखिँदैन । बाढीपीडितहरू तिनै हुन्, जो भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक अनि सामाजिक सम्बन्धका कारण भारतप्रति श्रद्धाशील छन् । तर उनीहरूले सँगसँगै के पनि महसुस गर्नुपरेको छ भने भारतले सीमा क्षेत्रमा ठूलाठूला बाँध बाँधेका कारण जमिनको सतहभन्दा धेरै माथि पुर्‍याई हाइवे बनाएका कारण डुबान हुन गयो ।
भारतले आफ्ना जनताका लागि मात्र भनेर सोच्दा भारतलाई नेपालपछिको घर ठान्ने नेपालीहरूबाट सधैं श्रद्धा भइरहने कुरा ठेगान रहँदैन । फेरि बर्खा आउँछ, फेरि डुबान हुन्छ । नेपालीको मन कुँडिन्छ । कहींका पनि नेपालीले बाध्यताका कारण भारतलाई मान्नुपर्ने स्थिति ठीक होइन । सहकार्य, सहचार्य र सहवृद्धिको बाटोबाट मात्र नेपालीले भारतलाई सर्वोच्च सम्मान दिइरहने कुरा सम्भव छ । -अन्नपुर्णपाेष्टबाट साभार गरिएकाे ।